အစားအသောက် Archives - Myanmar Express
စားချင်စဖွယ် အရမ်းအရသာရှိတဲ့ ပြည်ပလာတာချက်နည်း
ပြည်ပလာတာ စားဖူးပြီလား ?
အခြားမြို့တွေနဲ့ မတူပဲ အရသာကောင်းလွန်းလို့
ဓာတုပစ္စည်းကင်းပြီး ကျန်းမာ‌‌ရေးကို အလွန်အကျိုးပြုသည့် ပဲငံပြာရည် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နည်း
ပဲငံပြာရည်ကို တရုတ်လူမျိုးတို့သည် ဟင်းချက်ပြုတ်ရာ၌ အသုံးများကြသည်။ မြန်မာတို့လည်း စားသုံးကြသည်။ အထူးအားဖြင့် သက်သက်လွတ်ဟင်းများ၌ ငါးငံပြာရည်အစားပဲငံပြာရည်ကို သုံးကြသည်။ ပဲငံပြာရည်ကိုမူ ပဲဗိစပ်မှ အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ယူကြသည်။
ပူပူ စပ်စပ် ငါးသောက်ဆမ်း ရခိုင်ချက်
ငါး သောက် ဆမ်း ဟင်း ချက် မယ် ဆို ရင် ပ ထ မ ဦး စွာ ငါး ကို သန့် စင် ဆေး ကြော ပြီး အ နေ တော် တုံး ကာ ဆား၊ န နွင်း နယ် ထား ပါ။
ကုလားပဲခြမ်းများ အနည်းငယ်နူးပြီး ကွဲလာလျှင် နယ်ထားတာတွေထည့်ပါ။ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပါ။
အရင်ဆုံး ကြက်ရိုးများကို ကြက်သွန်ဖြူ ၅မွှာ၊ဂျင်းလက်၁ဆစ် ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ပြုတ်ထားပါ။
မှိုခြောက်ပန်းခြောက်များကို ရေစိမ်ထားပါ။ ပွလာလျှင်ရေစင်အောင်ဆေး၍အနေတော်ညှပ်ထားပါ။
ဒယ်ထဲ ဆီထည့်ပြီး ဆီပူလာရ ကြက်သွန်နီ ဖြူ ဂျင်း ဆီသတ်ပါ။နနွင်း အရောင်တင်မှုန်.ထည့်ပါ။
ကျန်းမာရေး လိုက်စားသူဖြစ်လာစေဖို့ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အစားအသောက် (၅) မျိုး
တော်တော်များများ ထင်တတ်ကြတာ အစားအစာတိုင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် မမှန်ကန်တဲ့ ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေဆိုတာလည်း ရှိနေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးပါတယ်။ အစားအသောက်တိုင်းက ကျန်းမာရေးမကောင်းစေပါဘူး။
ဘိတ်ချဉ် လုပ်နည်း(ပဲခူး ဒေါ်ထွေးရီ)
၁။ ကြက်သွန်ဖြူ ဥတစ်လုံး ၂။ ငရုတ်သီးစိမ်း ၃။ ရှာလကာရည် ၄။ ငံပြာရည် ၅။ အချိုမှုန့် အားလုံးရောပီး စိမ်ထားရုံပါပဲ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများဝက်အဆီနဲ့ အသား – ၃၀၀ ဂရမ် (အနေတော်အရွယ် တုံးပေးပါ)မှိုပွင့်ခြောက် – ၆ခု (ရေနွေးဖြင့် ၃မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပြီ ပါးပါးလှီးပါ)မုန်လာဥနီ – ဥကြီး ၁ဥ (အခွံနွှာပြီ အတုံးလတ်များ တုံးပါ)ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (နှုတ်နှုတ်စင်းပါ)ကြက်သွန်နီ – ၁လုံး (၄စိပ်စိပ်ပါ)ကြက်ဥ – ၃လုံး (ကျက်အောင် ပြုတ်ပြီ အခွံနွှာထားပေးပါ)ရေ – ၂ခွက် (Measurement ချိန်ခွက် ၂ခွက်)
ကိုက်လန် ၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး များ
ကိုက်လန်ကို အဆိပ် ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ အစာလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၈) ချက်
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် သင် ဒါတွေ သိပါသလား။ ဖတ်ရှုပြီး လိုက်နာဆင်ခြင်ပါ။ မိမိ ကိုယ်တိုင်ရော၊ မိသားစု နှင့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ အားလုံး ကို လည်း လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးလိုက်ပါ …. ။ (၁) ဆေးလိပ် မသောက်ပါနှင့်။ ထမင်းစားပြီးနောက် စီးကရက် ၁-လိပ်သောက်ခြင်း သည် သာမန် အချိန် စီးကရက်၁၀-လိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ညီ မျှပြီး၊ ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာပိုများကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာရှင် များက သတိပေးထား သည်။ (၂) သစ်သီးများ အလျင်စလို မစားပါနှင့်။ ထမင်စားပြီးနောက် အချိုပွဲ သစ်သီး စားခြင်းသည် မှားယွင်းသော အစဉ်အလာ တစ်ခုဖြစ်နေကြပါသည်။ အမှန် အားဖြင့် ထမင်းစား ပြီးပြီးချင်း […]